Indlu yeeNdwendwe yaseDaksinapura, ilala 6
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguDewi
Indlu yethu yindibaniselwano yesitayile sanamhlanje kunye nesakwaNtu. Ungafumana igumbi lokuhlambela langoku ecaleni kwedivan zikamakhulu. Sifake umbala kumagumbi ethu okulala ngombala obomvu, omthubi noluhlaza ukuze sikuzisele ubushushu belanga lasemva kwemini.
Kwindlu yethu unokufumana:
- 3 amagumbi okulala amabini anemoya epholileyo
- 2 amagumbi okuhlambela kunye ne-heater yamanzi
- Igumbi lokuhlambela eli-1 eliqhelekileyo
- Igumbi lokutyela
-Igumbi lokuhlala kunye nekona yeencwadi
Indlu yethu ikwimizuzu emi-5 ukusuka kwindlela enkulu yaseGodean kunye nemizuzu engama-30 ukusuka kwindawo yaseMalioboro.
Ungabambisa ngokulula abathengisi bokutya, indawo yokubhaka, inkonzo yokuhlamba impahla, imakethi encinci, iisalon zebetty, isikhululo segesi kunye neATM.
Indlu yethu ikwindawo yaseSleman, kwicala elingasentshona lesixeko saseJogjakarta. Libala ukuphithizela edolophini, apha unokufumana inzolo. Hlala kwi-gazebo yethu kwaye uphumle. Uhlaza lwamasimi epaddy luphambi kwendlu yethu, ukuba nawe, nawe, unokufumana amava. Kuwe ofuna ukubamba umhlaba, isitalato iMalioboro sikumizuzu engama-30 kude nendlu.
Andihlali endlini okanye kufutshane. Nangona kunjalo, iindwendwe zinokundifumana ngencoko kaWhatsapp kunye ne-imeyile nangaliphi na ixesha elifanelekileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Gamping